China WC67Y Metal Sheet Inokotamisa Muchina Press Brake Kugadzira uye Fekitori | Knoppo
Muenzaniso Nha .: WC67Y
WC67Y wokudhinda akamedura ainyanya kushandiswa simbi jira, simbi ndiro vachikotama. Ainyanya kushandiswa kabhoni simbi, kwakakurudzira simbi, munyoro simbi, Stainless simbi, inox, aruminiyamu nezvimwe simbi.
● Iyo furemu isimbi-yakagadzirwa nesimbi, vibration kubvisa kushushikana, ine simba rakakwirira uye kuomarara kwakanaka.
● Yakawiriraniswa yakanaka yekumira dhizaini, uye neEstun NC inogadziriswa inodzora inovimbisa kudzokorora kwakaringana & nyore kwekushandisa.
● Variable invertor drive ye2 axis kuona yakanaka chaiyo.
● Inoshanda, yakaderera ruzha uye chaiyo hydraulic system.
● Slient uye yakavimbika yemukati giya pombi yeUSA brand Sunny.
● Yakabatanidzwa hydraulic system ichibvumira kukurumidza kuita switching otomatiki kunonoka kukotama.
● Inch, single mode inogadzirirwa muchina uye kudzoreredza uye kuchengetedza nguva inogona kudzorwa nenguva yekudzosera.
● Fenzi yakachengeteka uye yemagetsi inter locker zvakagadzirirwa muchina kuti uve nechokwadi chekushanda kwekuchengetedza.
● Gondohwe rakagashirwa hydraulic yepamusoro-dhiraivha ine maviri masirinda, ichishanda zvisina mushe uye mushe.
● Mechiniki yekumira nzungu dzinoona kugadzikana uye kuvimbika kwekumisikidza kurongeka
● Zvibhakera zvakakamurwa zvehurefu hwakasiyana zvinogamuchirwa izvo zvinogona kusanganisirwa muhurefu hwakati maererano nechisimba chekugadzirisa kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvemabasa ekushandira.
● Back gauge inotyairwa negwara nzira, inokurumidza, iri nyore uye yakarurama.
● Muchina unogona kutorwa neyakajairwa clamp zvishandiso kana nekukurumidza kirampiki zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi kudzikisira kushandira kwebasa kuwedzera uye kuwedzera kushanda kwebasa.
Otomatiki kumashure gauge, bhora sikuruu
Yakajairwa chibhakera uye mativi mana akawanda-V kufa
Rexroth hydraulic vharafu
Zvakajairika chishandiso simbi yekukombama
Chinofambiswa pamberi pezvinhu mutsigiri
Torsion bar kubvumirana
Zuva rine pombi yegiya
Dzoka mira zvigunwe
E21 mutungamiriri kubva estun
Netsoka chitiviri chemuchina
Pashure: Metal Tube Uye Sheet CNC Plasma Cutter
Zvadaro: KML-FC Yakazara Yakavharwa Fiber Laser Kuisa Mashini Ine Cover